Usoro ọzọ ebe nke a bụ esemokwu bụ nyocha mpaghara. DK New Media na nso nso a nyochara SEO na ụlọ ọrụ dabere na ọrụ na-arụ ọrụ mba. Nkwalite ha, ọdịnaya ha, nhazi saịtị ha - atụmatụ SEO ha dum - naanị lekwasịrị anya na usoro ọrụ izugbe na-enweghị ọdịdị ala ọ bụla.
Ndị asọmpi na-eri nri ehihie ha - inweta a narị ugboro okporo ụzọ n'ihi na ndị asọmpi ahụ ji ọgụgụ isi lekwasị anya maka ọdịdị ala dị ka isiokwu ọrụ. Mgbe ụlọ ọrụ a na-arụ ọrụ na ha SEO ọkachamara, geography abịaghị na mkparịta ụka ahụ n'ihi na mpịakọta ọchụchọ enweghị isi. Onye ọkachamara SEO lekwasịrị anya na ọnụ mmiri iceberg… ma hapụ 90% + nke nta, ọchụchọ ọchụchọ ala.
Companylọ ọrụ ahụ nọ na nsogbu… ha nwere ọtụtụ ala iji gbalịa imezi ma ọ bụrụ na ha nwere olile anya ịbụ onye ndu na ọchụchọ metụtara ọrụ. Nke bụ eziokwu bụ na nchọta mpaghara bụ isi okwu mgbe ị na-achọ ọrụ mpaghara. Not na-agaghị ịchọ “ụgbọ ala asacha” na Google Google ị na-aga ịchọ agbata obi gị ma ọ bụ obodo na mgbakwunye na “ụgbọ ala asacha”. O nwere ike ọgaghị enwe nnukwu ọchụchọ maka “Albuquerque car wash”
Ọ dị mma iduzi atụmatụ na njedebe nke iceberg, tụọ ya, nyochaa ya, ma bulie ya elu. Otú ọ dị, echefula na ị na-arụ ọrụ naanị n'ọnụ!